Ọtụtụ ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ maka igbu onwe ha nwere ike ịchọta egbe n'ụlọ - Ụwa 2022
Ọtụtụ ụmụaka nọ n'ihe ize ndụ maka igbu onwe ha nwere ike ịchọta egbe n'ụlọ
Nnyocha ọhụrụ chọpụtara na ihe karịrị pasent 17 nke ụmụaka ndị e chere na ha nwere ike igbu onwe ha nwere ike ịnweta égbè n'ụlọ ha, na-eme ka ọ dịrị mfe otu mkpebi na-enweghị isi ịghọ onye na-egbu egbu.
E gosipụtara ọmụmụ ihe na Pediatric Academic Societies (PAS) nzukọ kwa afọ na Washington. Ndị nchọpụta na-agbalị ịmepụta ndepụta dị mkpirikpi nke ajụjụ dị mfe maka ndị dọkịta na-ahụ maka ụlọ mberede ka ha na-ahụ ụmụaka nwere nsogbu dị iche iche, NBC News kọrọ.
Ihe ha chọpụtara bụ na n’ime ndị ọrịa 524 a gbara ajụjụ ọnụ n’agbata afọ 10 ruo 21, pasent 29 nọ n’ihe ize ndụ igbu onwe ha. Ọzọkwa, pasent 17 nke ndị nọ n'ihe ize ndụ igbu onwe ha nwere ike ịhụ egbe gburugburu ụlọ ha. Pasent 31 n'ime ha maara ebe a na-echekwa egbe, pasent 31 maara ebe mgbọ dị, na pasent 15 maara ebe ha nwere ike ịhụ ha abụọ.
"Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ntorobịa na-egbu onwe ha nwere nsogbu ahụike uche, ihe dị ka pasent 40 nke ndị ntorobịa na-egbu onwe ha amaghị ọrịa uche," Jeffrey A. Bridge, onye na-ede akwụkwọ nyocha na ọkachamara igbu onwe onye ntorobịa na Mahadum Ohio State, gwara Oge LA. "Ọmụmụ ihe a na-egosi mkpa ọ dị ndị nne na nna na-aghọta ihe ize ndụ nke inwe égbè n'ụlọ. Ịnọ n'ihe ize ndụ nke igbu onwe na ịnweta égbè bụ ihe mgbagwoju anya."
N'agbanyeghị nke ahụ, ọmụmụ ihe ahụ nwere ike ledara ihe ize ndụ ahụ anya.
"Nnyocha na-egosi na ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụaka na-ebi n'ụlọ nwere ngwa agha," ka Matthew Miller, onye osote prọfesọ na Harvard School of Public Health na ọkà okwu na PAS kwuru, gwara USA Today. "Ihe dị ka nde ụmụaka 1.5 bi n'ụlọ ebe a na-edobe egbe ma na-emeghe. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị na-eto eto a gbara ajụjụ ọnụ amaghị na ndị mụrụ ha nwere egbe."
Igbu onwe ya bụ ihe nke atọ na-ebute ọnwụ na ndị ntorobịa n'etiti afọ 10 ruo 24, dị ka erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC), nke nwere ngwa agha na-akpata pasent 45 nke ọnwụ, karịa nsị (pasent 40) na nsị (8). pasent).
Ndị nyocha ahụ kwusiri ike mkpa ọ dị inyocha ndị na-eto eto maka ịda mbà n'obi na echiche igbu onwe ha.
Ajụjụ anọ a jụrụ n'oge ajụjụ ọnụ ahụ bụ:
N'ime izu ole na ole gara aga, ọ dị gị ka ị nwụọ?
N'ime izu ole na ole gara aga, ị chere na ọ ga-akara gị mma ma ọ bụrụ na ị nwụọ?
N'ime izu gara aga, ị na-eche echiche igbu onwe gị?
Ị gbalịrị igbu onwe gị?
"Ozugbo ị na-amata ụmụaka, dị njikere itinye aka na mkparịta ụka banyere ịnweta ngwa agha," ka Dr. Stephen Teach, onye edemede nke ọmụmụ ihe na dọkịta ụlọ mberede na Children's National Medical Center na Washington kwuru. Banyere ndepụta ajụjụ ya, na-agbakwụnye na "ụmụaka chọrọ n'ezie ka a jụọ ha; mmeghachi omume dị mma."